Dhammaan wixii ku saabsan iPhone ee ku jira iPhone News | News IPhone (Bogga 7)
Sida loogu isticmaalo muuqaalada 'HomeKit' HomePod
Apple aqbal ahaan uma ogola HomeKit inuu la falgalo HomePod, laakiin adoo adeegsanaya codsiyada toobiyeyaasha waan hagaajin karnaa.
Midabyo cusub oo loogu talagalay kiisaska iPhone iyo Apple Watch
Apple waxay uruurisay $ 200 milyan iyada oo loo marayo iibinta (PRODUCT) RED si loola dagaallamo AIDS-ka
Tan iyo markii ay Apple bilawday kaqaybqaadashada Sanduuqa Caalamiga ah ee RED si loola dagaallamo AIDS-ka, shirkadda Tim Cook waxay uruurisay in kabadan $ 200 milyan.
Wax uga beddel goobta iyo taariikhda sawirradaada si fudud MetaTrixter
Thanks to codsiga MetaTrixter, waxaan ku dari karnaa ama ku saxi karnaa metadata sawiradayada si toos ah iPhone-keena
Sida loo isticmaalo "Ka-reebitaanka Degdegga ah" ee iOS 12
Taleefankayaga iPhone wuxuu ku dhawaaqi doonaa codka xiriirka xitaa haddii iPhoneku aamusnaado iyo xitaa haddii iPhone leeyahay Haku mashquulin Xaaladda firfircoon.
Tani waa sida kooxda cusub ee FaceTime ay ugu yeeraan iOS 12
IOS 12.1 waxay la timid muuqaal cusub oo FaceTime ah oo u oggolaanaya abuuritaanka wicitaanno iyo wicitaanno fiidiyoow ah oo gaaraya illaa 32 qof. Sidan ayaa loo adeegsadaa.
Logitech Powered, xeedho wireless ah in Apple sameeyo
Waxaan tijaabinay saldhigga lacag la'aanta ah ee Logitech Powered, iyadoo nashqad ay Apple lafteeda saxiixday iyo xallinta dhibaatooyinka saldhigyada kale ee la midka ah.
Kala duwanaanta muraayadaha 'Olloclip lens' waxay ku fidaysaa laba taxane oo cusub
Noocyada kala duwan ee muraayaddaha loo yaqaan 'Olloclip' ee muraayadaha iPhone-ka ayaa la ballaariyay iyadoo lagu daray laba muraayadaha indhaha oo cusub oo loogu talagalay adeegsiyo kala duwan: Intro iyo Pro.
Koogeek qiimo dhimis ayaa lagu sameeyaa wixii ka dambeeya Isniinta
Koogeek wuxuu na siiyaa qiimo dhimis cusub alaabteeda kadib usbuuca Black Friday iyo Cyber ​​Monday, oo wata otomaatiga guriga iyo caafimaadka
Sida loo arko loona tirtiro aaladaha la xiriira koontadayada
Haddii aad rabto inaad ka noqoto ruqsadda kombiyuutarku haysto maanta inuu ku xirmo iTunes kana helo dhammaan waxyaabaha aan soo iibsannay, waa inaad ka noqotaa oggolaanshaha aad horay u siisay.
Sida loo helo MacX DVD Ripper Pro bilaash
MacX DVD Ripper Pro waa beddele DVD awood leh oo aad si buuxda uga heli karto lacag la'aan adoo raacaya talaabooyinkan
Jimcaha Madow wuxuu yimaadaa LIFX oo leh iib muhiim ah
LIFX, mid ka mid ah sumadaha tixraaca ee laydhka la jaan qaadaya HomeKit iyo Amazon Alexa, ayaa ka faa'iideysanaya Black Firday si ay hoos ugu dhigto alaabteeda.
Tani waa xayeysiiska Kirismaska ​​ee Apple "La wadaag hadiyadahaaga", ama "La wadaag kartidaada"
Tani waa xayeysiiska Kirismaska ​​ee Apple "La wadaag hadiyadahaaga", ama "Wadaag hadiyadahaaga"
Kuwani waa ciyaaraha Isbaanishka ugu fiican iyo codsiyada ay bixiso TheAwards
Kuwani waa codsiyada iyo ciyaaraha ugu fiican ee loogu talagalay Isbaanishka 2018 oo lagu siiyay TheAwards.
Qalabka ugu fiican iibka Jimcaha Madow
Noocyada tayada sare leh sida Mophie, Mujjo, InvisibleShield ama LaMetric ayaa noo keena qiimo dhimis qiimo leh haddii aan wax ku iibsanno degelkooda.
Tumblr, sida Telegram, ayaa ka baxay App Store si ay u muujiso sawir-gacmeedka carruurta
Codsiga hubinta ee Tumblr ayaa laga saaray App Store jimcihii la soo dhaafay sababtoo ah waxay siisay marin u helista sawir-gacmeedka carruurta ee hareer maray miirayaasha shirkadda.
Emojis-yada ugu caansan ee ku jira iOS 12.1 waa bidaar iyo isugeyn
Markii la sii daayay macruufka 12.1, Apple wuxuu soo saaray emojis cusub, kuwaas oo qaar ka mid ah noqdeen kuwa ugu badan ee la isticmaalo
Warka ku saabsan cusbooneysiinta soo socota ee PUGB ee maanta timaadda App Store
Maanta ayaa la cusbooneysiiyay cusbooneysiin cusub oo ah 'PUBG Mobile', oo ah casriyeyn na siineysa Beryl M762 iyo tan ugu sareysa ee firfircoon ee wararka ugu weyn.
Sida loo xoojiyo ama loo joojiyo ogaanshaha tababarka ee watchOS 5
Koogeek Deals for HomeKit iyo Caafimaadka
Dalabyo cusub oo ka yimid Koogeek oo loogu talagalay HomeKit iyo Amazon Alexa kaabayaal isku habboon, oo leh nalalka casriga ah, xargaha LED-ka iyo fiilooyin.
Steth IO ayaa iPhone-gaaga u rogaya stethoscope xirfad leh
Steth IO waa kiis u rogaya iPhone-gaaga takhasus gaar ah oo falanqeynaya dhawaaqyada wadnaha iyo sanbabada.
Sawirrada Google ayaa noo oggolaanaya inaan wax ka beddelno saamaynta bokeh ee sawirradeenna
Shaqada cusub ee ka iman doonta gacanta cusbooneysiinta soo socota ee Sawirada Google ayaa noo oggolaan doonta inaan wax ka beddelno mugdiga sawirrada marka lagu daro quusinta midabka asalka
Sida loo qaado shaashadda iPad Pro
Marka laga saaro badhanka guriga iPad Pro 2018, qaadashada shaashadaha waxay u baahan tahay isku-dhaf kale oo isku dhafan oo aan ku sharaxno qodobkaan.
Hel bilaash VideoProc, barnaamijka ugufiican fiidiyowga
VideoProc wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameyso fiidiyow aad u fudud oo fiidiyow ah laakiin leh qalab awood leh si aad u gaarto natiijooyin la yaab leh.
Sida loo dejiyo Alexa on iPhone ee loogu talagalay dadka ku hadla Sonos [VIDEO]
Waxaan ku tusineynaa sida loogu hagaajiyo Alexa on Sonos ku hadla smart ama nooc kasta oo si toos ah uga socda iPhone-ka, ha moogaanin.
Tumblr ayaa ka lumay App Store
Codsiga Tumblr ayaan laga helin App Store maalmo kooban. Sida laga soo xigtay shirkadda, waxay ka shaqeyneysaa sidii dib loogu soo celin lahaa sida ugu dhakhsaha badan.
Apple Watch horeyba waxay u haysay (PRODUCT) RP Loop suunka
Kooxda cusub ee 'PRODUCT' (RED) ayaa hadda loo heli karaa Apple Watch, labadaba qaab 40mm ah ama 44mm ah
Ring wuxuu soo bandhigayaa kamaradihiisa amniga gudaha iyo dibaddaba
Ring wuxuu soo bandhigayaa kaamirooyinka ilaalada fiidiyowga ee gudaha iyo dibaddaba oo leh fiilooyin ama ikhtiyaarro xiriir la leh batteriga
Laba iyo tobanka koonfureed waxay ku daraysaa seddex kiis oo cusub iPhone, BookBook, Joornaalka iyo SurfacePad
Milkiilaha Facebook wuxuu weydiisanayaa hawl wadeenadiisa inay u wareegaan Android
Erayada Tim Cook, milkiilaha Facebook wuxuu go'aansaday inuu ku amro maamulayaashiisa inay isticmaalaan kaliya taleefannada Android.
Waxaan falanqeyneynaa nadiifiyaha nadiifiyaha, xoogga iyo waxtarka Roidmi F8 Storm
Waxaan falanqeyneynaa Xiaomi Roidmi F8 nadiifiye aan xadhig lahayn, beddelaadda nooca Shiinaha oo leh waxtarka ugu sarreeya iyo awoodda moodooyinka ugu sarreeya
New Koogeek wuxuu ku bixiyaa qalabaynta guryaha iyo caafimaadka
Waxaan kuu soo bandhigeynaa Koogeek dalabyo cusub oo loogu talagalay otomaatiga guryaha iyo alaabada caafimaadka oo leh qiimeyaal soo jiidasho leh waqti xadidan
Waa maxay calaamadda iCloud horteeda magaca arjiga macnaheedu macruufka
Haddii aad had iyo jeer ka fekerto waxa calaamadda iCloud oo fallaar hoos ugu socota codsiyada horteeda loola jeedo, qodobkaan waxaan ku tusi doonaa macnaheeda.
Sida loo Wadaago Furayaasha la keydiyey adoo adeegsanaya AirDrop
Beddelka Express iyo farqiga u dhexeeya iPhone-ka dib loo hagaajiyay iyo midka caadiga ah
Waxaan kuu sharraxeynaa faa'iidooyinka beddelka degdegga ah iyo maxay ku kala duwan yihiin iPhone-ka dib loo hagaajiyay, iyo iPhone-ka loo iibsado habka caadiga ah.
ECG ee Apple Watch waxaa looga isticmaali karaa Isbaanish iyadoo la beddelayo gobolka
Xaqiiqda ah in Apple Watch ay horeyba u haysatay wax kasta oo lagama maarmaan u ah in lagu sameeyo qalabka korontada ayaa noo oggolaan doonta inaan ku isticmaalno meel ka baxsan Mareykanka.
Sida looga helo heesaha Apple Music ereyadooda
IOS 12, Apple waxay ku dartay sheeko ku cusub Apple Music oo ka kooban raadinta heesaha erayadooda oo aan ku jirin magacooda oo buuxa.
MiniBatt Fly iyo Modular, lacag-ku-shub deg-deg ah iyo qaab-dhismeed
Waxaan tijaabinay laba saldhig oo cusub oo MiniBAt ah oo bixiya fursado kala duwan oo ku habboon qalab kasta oo Qi ah.
Moshi Porto 5K, baytari iyo xeedho wireless, dhammaantood hal
Waxaan tijaabinay Moshi's Porto Q 5K bank wireless poweringing, tusaale ahaan in naqshada iyo teknolojiyaddu aysan aheyn inay is khilaafaan.
Sida looga hortago farriimaha maqalka inay iska tir tiraan farriimaha
Koogeek wuxuu isu diyaarinayaa jimcaha madoow
Waxaan kuu soo bandhigeynaa xulashooyinka Koogeek oo leh qiimo dhimis muhiim ah adoo adeegsanaya lambarrada ku jira maqaalka
Codsiga Gawaarida ayaa mar kale la cusbooneysiiyay si uu ula jaan qaado iPad-ka cusub
Codsiga Gawaarida ayaa ficil ahaan noqday tan iyo markii Apple ay ku soo bandhigi doonto keyonte loogu talagalay horumariyeyaasha la qabtay markii ugu dambeysay ...
Ku cusbooneysii iPhone-kaaga, Apple Watch ama iPad heshiisyadan eBay
Si loogu dabaaldego Maalinta Iibsashada Adduunka, oo loo dabaaldego 11-11, ragga eBay waxay noo soo bandhigeen tiro badan oo dalabyo xiiso leh oo aynaan seegi karin.
Fitbit Versa iyo Charge 3, oo ah calaamadihii ugu dambeeyay ee sumcadda si ay ula tartamaan Apple Watch
Fitbit mnos waxay bixisaa waxyaabo kale oo loogu talagalay shaashadda Apple Watch ee ku saabsan madax-bannaanida iyo qiimaha la awoodi karo iyada oo aan laga bixin tan ugu wanaagsan tiknoolajiyada
macruufka 12.1.1 waxay keeneysaa Sawirro Live ah wicitaanada FaceTime
Beta-kii ugu dambeeyay ee macruufka 12.1.1 wuxuu dib ugu soo celiyay Sawirro Live ah wicitaanada Face Time sidoo kale wuxuu qarinayaa horumarada qaarkood.
Wax walba waxay muujinayaan in iPhone uusan heli doonin 5G illaa 2020
Galiye wuxuu ka ilaaliyaa iPhone XS, XS Max iyo XR dhibcaha ilaa 3 mitir
Waxaan falanqeyneynaa kiiska ilaalinta saameynta Hannaanka, mid ka mid ah kuwa ugu fiican qaybtiisa qaabeynta, ilaalinta iyo dhammeystirka
Hagaajinta Aqoonsiga Face iyo wax yar oo kale sanadka 2019
Kuo wuxuu aaminsan yahay in Apple ay si weyn kor ugu qaadi doonto Aqoonsiga Face-ka sanadka soo socda.
Suuqa taleefannada adduunka ayaa hoos u dhacay 6% halka Samsung ay burburtay
Guud ahaan, suuqa taleefannada gacanta ee casriga ah ayaa hoos u dhacay 6% guud ahaan, iyadoo Samsung ay ka mid tahay kuwa ugu waxyeellada badan arrintan.
Kiisaska maqaarka ugu fiican ee iPhone XR
Mujjo wuxuu na siiyaa kiisaskeeda maqaarka caadiga ah ee loogu talagalay iPhone XR oo leh tayada caadiga ah, oo ku fadhiya booska Apple ka tagay oo madhan.
Apple waxay ku dhawaaqday Rubuc kale oo rikoor ah laakiin maalgashadayaasha kuma filna
Apple ayaa mar kale ku dhawaaqday rikoor dakhli laakiin suuqyada ayaa mar kale ciqaabaya ficiladooda iyada oo hoos u dhac ku yimid suuqa saamiyada iyo shaki
Koogeek wuxuu ku bixiyaa qalabaynta guriga iyo caafimaadka
Dalabyo cusub oo ka yimid Koogeek oo ay ku jiraan aalado lala wadaagi karo HomeKit, Amazon Alexa iyo agabyo si loo daryeelo caafimaadkeenna.
Waxaan falanqeyneynaa mophie Powerstation XXL
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin baytar aad u weyn dhinac walba, si loogu beddelo safaradaada fiilada, ha ka waaban, waxaad u baahan tahay mophie Powerstation XXL.
IOS 12.1 hadda waa la heli karaa dhammaan isticmaaleyaasha
Cusboonaysiinta ugu horreysa ee ugu weyn ee iOS 12, lambarka 12.1 ayaa hadda loo heli karaa dhammaan adeegsadayaasha leh qalab la jaan qaadaya macruufka 12.
IPad Pro waa la cusbooneysiiyay: macsalaameyn looxyada, hello Face ID iyo USB-C
Kadib wararkii badnaa ee aan helnay maalmihii ugu dambeeyay, Apple waxay cusbooneysiineysaa iPad Pro bilaa xayndaabyo iyo Face ID iyo USB-C. IPad-ka ugu dambeeya.
MacBook Air waxaa lagu cusbooneysiiyay muuqaalka 'Retina' ee muuqaalka oo xitaa ka khafiifsan qaabkii hore
Ragga ka socda Cupertino waxay ku bilaabayaan hordhaca aaladda MacBookga cusub: muuqaal cusub oo ah qaybta dambe ee kombiyuutarka.
Noocyada Apple Link Belt ee ugu Fiican
Waxaan tijaabinay noocyadii ugu fiicnaa ee aan soo aragnay ee caanka ah ee qaaliga ah ee isku xirnaanta 'Apple link' ee aad ku heli karto meeltobnaad ee qiimaheeda
Sida loo beddelo nidaamka loo soo bandhigo xiriirada
Qodobkaan waxaan ku tusineynaa sida aan u badali karno amarka xiriirada mar kasta oo aan ka helno buugga taleefanka ee iPhone ama iPad-ka.
Sida loogu daro istiikarada cusub WhatsApp-ka iPhone-ka
Waxaan kuu soo qaadaneynaa casharka ku saabsan sida loogu daro istiikarada aad rabto inaad ku sameyso WhatsApp-kaaga iPhone-ga si fudud
Dhamaantood waxaa lagu diyaariyey Howard Gilman Opera House berri Muhiim ah
Ragga ka socda Cupertino waxay leeyihiin wax walba oo diyaar u ah soo bandhigida iPads Pro cusub ee Muhiimka ah Sebtember 30 ee New York.
Sida loo abuuro astaamaha shaashadda ee hababka aad jeceshahay
Casharkaan waxaan ku tusineynaa sida aad ugu darsan kartid tuuryo aad jeceshahay shaashadda guriga ee IOS.
Tani waxay ahayd bilawga iPhone XR ee Puerta del Sol
Shaki iigama jiro in iPhone XR uu noqon doono iibiyaha ugu fiican, laakiin bilowgeedu ma ahayn, illaa iyo hadda, heer sare.
Xaqiijiyay: Booliisku mar dambe uma isticmaali karaan GrayKey inuu furo iPhones ka dib markii la sii daayay iOS 12
Ragga ka socda Forbes waxay xaqiijinayaan in Apple uu xannibi lahaa marin u helka USB-ga iPhone-ka, sidaasna ku xayirayo hawlgalka aaladda GrayKey.
Koogeek wuxuu ka shaqeeyaa Qalabka Daryeelka Caafimaadka
Waxaan kuu keenaynaa 2 Koogeek oo ku saabsan alaabooyinka daryeelka caafimaadka sida heerkulbeeg dijitaal ah iyo masaajiye elektaroonig ah.
Kiiska batteriga wireless-ka ee iPhone X / XS ee shirkadda Mbuynow
Xaqiiqdi inbadan oo idinka mid ah ayaa batteriga ka dhamaaday iPhone-ka mar uun. Maalin…
Amazon waxay ku bilaabaysaa Spain qalabkeeda Echo qiimo dhimis weyn
Amazon waxay bilaabeysaa Echo ku hadla caqli leh oo leh Alexa oo isku dhafan gudaha Spain, iyada oo qiimo dhimis ah 405 loogu talagalay dadka isticmaala koontada Prime.
Amiirkii reer Faaris: Baxsad, waa weji qurxoon oo heer sare ah
Haatan waxaa imanaya Amiirkii Beershiya: Baxsad, oo ah muuqaal aad u cusboonaysiin iyo xiiso leh oo ka mid ah fasallada hore.
Koogeek Smart Outlet - Saddex Smart Plugs oo Hal ah
Waxaan falanqeyneynaa Koogeek Smart Outlet strip, oo la jaan qaadaya HomeKit iyo seddex xargo oo casri ah oo aad codkaaga ku maamuli karto
USB-C wuxuu beddeli doonaa hillaaca sida dekedda lacag-bixinta ee iPad-ka cusub
Shirweynihii meesha ay ku kulmeen soo saarayaasha qalabka, waxaa la hubiyay in iPad Pro 2018 cusub uu keeni doono isku xirnaanta USB-C.
Sida loo ogaado inta boos ee bilaash ah ee aan ku haysto iPhone-ka
Haddii qalabkeennu had iyo jeer haysto meel lagu kaydiyo oo ku filan, waxay noqon kartaa ogaanshaha meesha bannaan ee bannaan ee noo hadhay, waxay noo oggolaanaysaa inaan si wanaagsan u abaabulno barnaamijyada rakiban.
Beddr SleepTuner waa kormeerkii hurdo ee ugu horreeyay ee la xaqiijiyo ee la xidhan karo
Beddr SleepTuner waa aalad yar oo ay caddeysay FDA oo u adeegta kormeerka hurdada waxayna naga caawineysaa inaan ogaano cudurada.
Fortnite waa la cusbooneysiiyaa iyadoo lagu darayo gaari cusub iyo hagaajinta xakamaynta ciyaarta
Ciyaarta Epic Games ee wali aduunka moodada ugu jirta, Fortnite ayaa hada heshay gaadiid cusub markii ugu dambeysay.
Nooca 'Mickey' oo ay weheliso Beats Studio3 Skyline Collection cusub
Apple wuxuu bilaabay daabacaad gaar ah Beats Solo 3 si loogu dabaaldego sannad-guuradii 90-aad ee Mickey Mouse
Apple ayaa layaab ku noqotay soo saarida dhagaha cusub ee Beats Solo 3 oo wata nashqad lagu xusayo sanadguuradii 90aad ee Mickey Mouse.
Apple waxay raaci doontaa isla qaabkii iPhone ee ay soo bandhigtay inta lagu gudajiray sanadka 2019
Xanta ugu horeysa waxay bilaabeysaa inay kala shaandhayso waxa soo socda ee iPhone ee aan arki doonno 2019 noqon doono: moodello isdaba joog ah ...
VideoProc, tifaftiraha fiidiyowga ee 4K iyo kombaresarada (iyo bixinta GoPro)
VideoProc waa software tafatirka fiidiyowga ah oo isku daraya awoodda adeegsiga saaxiibtinimada, waadna iskudaydi kartaa si bilaash ah.
Apple waxay sii deysay laba fiidiyow oo iftiiminaya tababarka iyo astaamaha SOS ee Apple Watch
Apple waxay daabacday laba fiidiyow oo tixraacaya Xaaladda Degdega ah ee SOS iyo Tababbarka ee Apple Watch iyo watchOS.
Maaha mid ku hadla caqli badan, waa afhayeen la qaadan karo runtiina waa awood badan yahay: Ultimate Ears Boom 3
Maaha mid ku hadla caqli badan, waa runti awood xoog leh, aftahan la qaadan karo - Ultimate Ears Boom 3
Plantronics BackBeat Fit 3100, Wireless-ka runta ahi wuxuu yimaadaa isboorti
Waxaan falanqeyneynaa 'Plantronics BackBeat Fit 3100', oo ah nooca ugu horreeya ee dhagaha dhagaha ee 'True Wireless', oo ku habboon isboortiga iyo kiishad xeedho.
Logitech POP, badhan si loo xakameeyo HomeKit
Waxaan falanqeyneynaa Logitech POP, badhan muuqaal ah oo noo ogolaanaya inaan xakameyno qalabka kale ee HomeKit ee aan ku darnay gurigeenna
Mujjo Leather Case, maqaar tayo leh oo loogu talagalay iPhone XS iyo XS Max
Waxaan ku tijaabinay kiisaska maqaarka Mujjo ee iPhone XS iyo XS Max, oo laga sameeyay maqaar qaali ah oo lagu heli karo midabbo kala duwan.
Spektral, oo ah bilow kale oo ay iibsatay shirkadda Apple
Spektral, waa shirkad kale oo ay iibsatay Apple
30-pin ilaa adabtarada hillaaca ayaan hadda laga heli karin Apple Store
30-pin ilaa adabtarada hillaaca ayaa hadda laga waayey bakhaarka rasmiga ah ee Apple.
Jonathan Morrison wuxuu tijaabiyaa Google iyo Apple taageerayaashiisa qaabka sawirka
Jonathan wuxuu daabacay sawir isaga ah, isaga oo aan ilaawin inuu sharraxaad ka bixiyo sawirka uu ku qaaday Pixel 2-kiisa waana tan ay yidhaahdeen.
Sida fiidiyowyada loogu diro WhatsApp qaab GIF ah
U beddelashada fiidiyow qaabka GIF si loogu beddelo WhatsApp waa geedi socod aad u fudud oo aan u baahnayn barnaamijyada dhinac saddexaad
Hagaha adeegsiga qaabka "Ha dhibin" ee iOS 12
Waxaan kuu soo qaadaneynaa hagaha saxda ah ee ku saabsan wax kasta oo aad ku qaban karto Ha ku mashquulin iOS 12.
Sida loo isticmaalo saameynta cusub ee sawirrada ee Farriimaha
Waxaan ku tusineynaa sida loogu diro sawirro qabow barnaamijka Fariimaha adigoo mahadsan dhammaan saameyntooda cusub.
Khariidadaha Google ayaa ku daraya kantaroolka Apple Music, Google Play Music iyo Spotify
Khariidadaha Google ayaa ku darey koontaroolo muuqaalka hagista ee Apple Music, Google Play Music iyo Spotify maadaama Waze horey u oggolaatay.
Kooegeek Cusub Oo Loogu Talo Galay Guriga iyo Caafimaadka
Koogeek wuxuu ku noqday mudnaantiisa astaan ​​tixraac adduunka adduunka ah, gaar ahaan ...
Toddobo khiyaanooyin muhiim u ah Apple Watch
Waxaan kuu sharxeynaa toddobada howlood ee Apple Watch ee aad u baahan tahay inaad ogaato inaad ka faa'iideysan karto waxa ay Apple Watch na siiso
IPhone XS si fiican ayaa loo iibiyaa, laakiin iPhone 7 ayaa ka fiican
Dhaleeceynta ku saabsan hagaajinta "yar" ee ay ku jirto iPhone XS marka la barbar dhigo iPhone X waa ...
Kaamirada iPhone XS Max ayaa ugu dhow midka ugu fiican suuqa
Falanqaynta shirkadda "sharafta leh" ee DxOMark, websaydhka falanqeeyayaasha masuulka ka ah gooldhalinta ...
ACÉRCATE, waa barnaamij aad ku daryeesho kaaga
App-ka cusub ee EULEN APP ACÉRCATE wuxuu kuu ogolaanayaa inaad daryeesho kuwa aad ugu baahan taleefankaaga casriga ah, adoo og meesha ay joogaan iyo helitaanka digniinta.
Tile wuxuu bilaabay Tile Pro iyo Tile Mate cusub
Tile Pro-ka cusub iyo Tile Mate, oo leh warar aad u xiiso badan, sida batteriga la beddeli karo iyo ka ballaaran, oo ah wax ay adeegsaduhu dalbadeen.
TheAwards waxay aqoonsan doonaan ciyaaraha iyo barnaamijyada ugufiican barnaamijka barnaamijka
Ma waxaad tahay horumariyaha ciyaaraha fiidiyowga ama barnaamijyada loogu talagalay macruufka ama Android Ma rabtaa inaad muujiso sababta ay alaabta barnaamijyadu u khaas yihiin ...
Sida loo furo xiriiriyeyaasha barnaamijka YouTube-ka ee loo yaqaan 'Chrome' oo aan looga furi karin Safari
Haddii aad tahay isticmaale daacad u ah barnaamijyada Google, hoosta waxaan ku tusi doonaa sida loo furo xiriiriyeyaasha YouTube si toos ah Google Chrome
Apple Pay Cash waxay u imaan kartaa Yurub si dhakhso leh
Waxaa jira astaamo tilmaamaya in si dhakhso ah loo bilaabi doono shirkadda Apple Pay ee Spain iyo waddamada kale ee Yurub sida Talyaaniga, Jarmalka ama Faransiiska.
Cimilada Cimilada 2, xakamaynta caqliga u ah qaboojiyahaaga
Waxaan falanqeyneynaa xakamaynta qaboojiyaha Ambi Cimilada 2, oo ah nidaam adeegsada Sirdoonka Cilmiga ah si aad markasta ugu raaxaysato guriga
Waxaan falanqeyneynaa bangiga korontada ee 'EasyAcc power bank', oo ah beytar dibadeed kaas oo aan dib ugu cusbooneysiin karno iphone-ka iyo ipad-kanaga munaasabado kala geddisan adigoon markale ku xirneyn.
Choetech T513-S Xeedho wireless
Opera Touch waxay rabtaa inaad kaga tagto iphone-kaaga Chrome iyo Safari
Opera waxay soo bandhigtay Opera Touch, oo ah biraawsar cusub oo doonaya inuu madax-ilaa-madaxa la tartamo Safari ee iPhone-ka oo leh hawlo ay ka mid yihiin hal-ku-wareejin hal dhinac ah
Gear.Club - Racing True waa ciyaar xiiso leh oo lagu tartamo macruufka
Gear.Club ciyaar tartan cusub ah oo si fiican isugu dhafan sawirada, xawaaraha iyo shatiyada.
IOS 12 Gawaarida: Waxkasta oo Aad Ugu Baahan Tahay Inaad Ku Ogaato Tilmaamahan qeexaya
Waxaan kuu sheegeynaa waxa ay ka kooban yihiin iOS 12 Shortcuts oo waxaan ku tusi doonaa tilmaamahan saxda ah sida aad sida ugu badan uga heli karto codsigan cusub ee iOS.
Sonos One dib u eegis ku hadla, caqli badan lehna AirPlay 2
Waxaan falanqeyneynaa sameecadda 'Sonos One', oo ah tan ugu jaban ee sumadda laakiin leh "TOP" tayada iyo astaamaha sida AirPlay 2, MultiRoom iyo modularity.
Steel HR Sports, kani waa magaca Withings 'smartwatch hybrid cusub
Shirkadda Theings waxay dib ugu soo laabatay suuqa ka dib markii ay ku soo laabatay gacmaha mid ka mid ah aasaasayaasheeda shirkadda 'Smart HR Sport smartwatch'
Sida ugu dhakhsaha badan ee loo maareeyo ogeysiisyadayada ku jira iOS 12
Waxaan kuu soo bandhigi doonaa sida aad si dhakhso leh ugu maamuli karto ogeysiisyada iOS 12 adigoon ka tagin Xarunta Ogeysiinta iyada oo ay ugu mahadcelineyso nidaamka loo yaqaan 'Tunning Instant'.
Google waxay 9.000 milyan ka siisaa Apple inuu yahay mashiinkeeda raadinta
Google waxay sanadkaan bixisaa 9.000 milyan oo doolar oo ah inay noqoto mashiinka raadinta ee raadinta macruufka.
Facebook ayaa la kulantay weerar iyo xog laga helay 50 milyan oo isticmaale ayaa la helay
Facebook ma uga sii dari karaa? Mar dambe ma ogaan doonno inay tahay olole sumcad-darro oo aad u xoog badan oo warbaahinta caalamku ...
Belkin wuxuu soo bandhigayaa xaddiga cusub ee fiilooyinka fiilooyinka ee iPhone iyo Apple Watch
Soo saaraha qalabka ee iPhone, Belkin, ayaa soo bandhigay laba nooc oo cusub oo xeedho ah: mid moodel wireless ah iyo mid kale oo leh hillaac.
MacX MediaTrans, oo beddel u ah iTunes-ka oo aad hadda isku dayi karto bilaash
MacX MediaTrans waxay na siisaa bedel fudud oo dhakhso leh oo iTunes ah, oo leh shaqooyin ay ka mid yihiin sameynta codadka ama wareejinta feylasha.
Kaliya Mobile TENC iyo Xkin, ilaali iPhone-kaaga adiga oo aan dareemin
Ilaaliyaha shaashadda iyo kiiska ka ilaaliya iPhone-kaaga adoo faragelinaya sida ugu yar ee suurtogalka ah naqshadeeda, iyo tayada moobiilka
YouTube loogu talagalay macruufka ayaa horeyba u bixiya HDR iPhone XS
YouTube horeyba wuxuu u siiyaa dadka isticmaala iPhone XS iyo iPhone XS Max awood ay ugu raaxaystaan ​​waxyaabaha ku jira HDR.
Sida looga baxo barnaamijka beta beta ee ku saabsan iOS
Haddii aad u maleyneyso in la gaadhay waqtigii laga bixi lahaa barnaamijka beta beta ee dadweynaha, qodobkan waxaan ku tusinaynaa sida ugu dhakhsaha badan ee wax loo qabto.
Miyuu iPhone XS furayaa barnaamijyo ka dhakhso badan Galaxy Note 9?
Xaaladdan oo kale waxaan arki doonnaa natiijooyinka marka la furayo codsiyada u dhexeeya iPhone XS Max iyo Galaxy Note 9, midkee ayaa dhakhso badan?
IPhone X ayaa ka roon iPhones cusub tijaabada nolosha batteriga
Marka loo eego tijaabooyinkii ugu horreeyay ee awoodda batteriga, iPhone-ka cusub ee iPhone XS iyo iPhone XS Max waxay na siinayaan madax-bannaanida ka xun tii hore ee iPhone X.
FIFA 19 Companion wuxuu yimaadaa macruufka, u diyaari Kooxdaada Ultimate bilowga
FIFA 19 Saaxiibkiis hadda waxaa laga heli karaa IOS App Store si aad u diyaarin karto kooxahaaga Ultimate Team, gabi ahaanba waxba ha uga tegin fursad.
Plantronics waxay cusbooneysiineysaa noocyadeeda kala duwan ee sameecadaha dhammaan noocyada isticmaaleyaasha
Plantronics waa mid ka mid ah noocyada ugu jecel ee aan ku soo bandhigno alaab tayo leh oo qiimo macquul ah leh, sidaa darteed marwalba waa war wanaagsan inaad cusboonaysiiso qalabkaaga elektarooniga ah dib u cusbooneysiiso dhagaha dhagaha ee wireless-ka leh alaabooyin cusub oo qiimo jaban leh iyo dammaanad qaadka tayada codka sareysa.
Soo qaado kaamirooyinka ilaalada ee leh qiimo dhimis weyn
Yo wuxuu na siinayaa laba kamarad ilaalin ah, mid gudaha ah iyo mid banaanka ah, oo leh dalab qaas ah iyadoo la adeegsanayo rasiidhada aan tilmaamno.
Sida loo abuuro ringtones-kaaga iPhone-ka bilaash
Waxaan kuu sharraxeynaa sida aan ugu abuuri karno codadka taleefannada iphone-keena oo aan ugu gudbinno si fudud, dhowr daqiiqo iyo sidoo kale, bilaash.
Koogeek u beddelo HomeKit illaa 33% dhimis
Koogeek waxay iibineysaa furayaasheeda la jaan qaada HomeKit iyadoo qiimo dhimis lagu sameynayo ilaa 33% iyadoo la adeegsanayo xeerarkan Amazon.
Taxanaha Apple Watch 4 LTE: Daah-furka iyo Dareenka Koowaad
Waxaan eegnay Apple Watch Series 4 cusub, gaar ahaan nooca birta ah ee loo yaqaan 'Jet Black steel' oo leh 44mm LTE, isbadal layaableh oo Apple Watch ah.
iPhone XS Max: Fashilinta iyo Dareenka Koowaad
Waxaan eegeynaa iPhone XS Max, oo ah taleefanka casriga ah ee shaashadda ugu weyn leh ee Apple waligiis soo saaray. IPhone weyn oo leh astaamo waaweyn.
Caafimaadka oo ah udub dhexaad u goynta tiknoolajiyada Apple
Apple way iska cadahay in caafimaadka ay tahay inuu tiir muhiim u ah horumarinta wax soo saarkiisa, si loo wanaajiyo nolosha dadka isticmaala.
Beta-ka macruufka 12.1 horeyba waa mid guud, ka faa'iideyso fursad aad ku rakibto
Runtii waxaan ku jirnaa wajiga beta beta iOS 12.1 oo hadda waad ku soo dejisan kartaa warka ay tani u baahan tahay, sida FaceTimes.
Sidee loo arkaa widget-ka qarsoon ee iOS 12
IOS 12 waxaa ku jira qalab qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo dhahaya subax wanaagsan saadaasha hawada, waxaan kuu sharxeynaa sida loo kiciyo
Qoraal yar oo ka mid ah iPhone-ka 2019
Sida laga soo xigtay wararka xanta ah, iPhone wuxuu yeelan doonaa 50% wax ka yar xajmiga qoraalka, isagoo degan wax ka yar cidhifka kore ee shaashadda iPhone.
Qaar ka mid ah Abaalmarinta Waxqabadka ayaa la waayey iOS 12, laakiin way soo noqon doonaan
Apple sifiican ayey u ogtahay inaad lumisay qaar ka mid ah abaalmarinnada waxqabadka, laakiin waxay ballan-qaadday inay ku laaban doonaan cusbooneysiinta mustaqbalka.
Waxaan kuusoo bandhigeynaa fiidiyowga dhammaan wararka iOS 12
Maaha wax la mid ah in loo arko sida loo sheegayo, taasi waa sababta aan u sameynay fiidiyoow aan ku sharxeyno wararka ugu muhiimsan ee lagu soo bandhigo iOS 12.
Twitter ayaa mar kale u oggolaan doonta jadwalka adag ee taariikhda
Bogga rasmiga ah ee taageerada Twitter wuxuu ku dhawaaqay warka inagu soo aaddan waqtigeenna taasna waxay noo oggolaan doontaa inaan si wanaagsan u xakameyno waxa aan aragno.
Tijaabinta HomePod ee Isbaanishka
Daahfurka HomePod ee iOS 12 ayaa ugu dambeyntii keenay luuqada Isbaanishka afhayeenka Apple ee caqliga badan, waan tijaabinay waxaanan kuusoo bandhigi doonaa muuqaal ahaan
Falanqaynta Tamarta Nidaamka Tamarta 7, awoodda iyo qaabka qiimaha wanaagsan
Energy Sistem waxay soo bandhigtay nidaamkeeda Tower 7 True Wireless, oo leh 100W awood, gallo maqal badan iyo naqshad caadi ah oo sifiican loo dhammeeyay
Logitech Crayon, waxaan ku falanqeyneynaa beddelka jaban ee qalinka Apple
Waxaan gacanta ku haynaa Crayon ka Logitech waxaanan dooneynaa inaan falanqeyno haddii aan runtii wajaheyno "raqiis" beddel ah qalinka Apple.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u cusbooneysiiso iOS 12
Apple wuxuu ku saabsan yahay inuu soo bandhigo macruufka 12 waxaanan kuu sharxaynaa wax walba ama waxaad u baahan tahay inaad ogaato ka hor inta aanad cusboonaysiin qalabkaaga oo dhan.
4 Astaamaha cusub ee iOS 12 ee aan laga heli karin iPhones duqoobay
Sidii caadiga ahayd, qaar ka mid ah astaamaha cusub ee iOS 12 laguma heli doono dhammaan moodooyinka la jaan qaada nooca ugu dambeeya ee iOS.
Kulaylka iyo Arrimaha Sooftiweerka, Sababaha Macquulka ah ee Saldhigga AirPower Lag
Apple waxay ka saartay dhamaan tixraacii saldhiga AirPower boggeeda internetka walina ma ogin bilowgeeda. Kuwani waa sababaha.
KardiaBand sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad ECG ku qaadato Apple Watch-kaaga
KardiaBand waxay horeyba ugu ogolaatay Apple Watch inay ku duubto ECG-gaaga kaliya 30 ilbiriqsi. Waxaan kuu sharxeynaa sida ay u shaqeyso iyo qiimaha ay ku kacayso.
ZENS waxay soo bandhigeysaa baytariyadeeda cusub ee dibada oo ay kujirto xukun wireless ah
ZENS waxay na tuseysaa baytariyadeeda cusub ee dibada oo ay kujiraan fiilooyin wireless ah iyo awoodahooda ilaa 9.000mAH taas oo kuu ogolaaneysa inaad iPhone-kaaga ka buuxiso meelkasta.
Hel Koogeek heerkulbeegga caqliga leh oo leh qiimo dhimis ka badan 50%
Koogeek wuxuu na siiyaa qiimo dhimis heerkulbeegyo caqli leh oo u oggolaada cabbiraad deg deg ah, sax ah oo ka koontaroola iPhone-kaaga
Sidee Dual SIM-ka cusub ee iPhone XS iyo XS Max u shaqeeyaa
Waxaan kuu sharraxeynaa dhammaan faahfaahinta ku saabsan eSIM, sida ay u shaqeyso iyo sida shaqeynta 'Dual SIM' loogu isticmaalo iPohne XS iyo XS Max cusub
Soo dejiso waraaqaha cusub ee iPhone X iyo iPhone XS Max
Ka hel kaliya waraaqaha cusub ee cajiibka ah ee aad ku aragtay soo bandhigida cusub ee iPhone XS iyo XS Max.
Hadda waxaa laga heli karaa fiidiyowga qodobka ugu dambeeyay ee ku yaal bogga Apple
Haddii aadan fursad u helin inaad ku raaxeysato fiidiyowga bandhigga muhiimka ah ee IPhone-ka cusub iyo Apple Watch, waxaad ku sameyn kartaa sidaas adoo adeegsanaya websaydhka Apple.
Apple wuxuu joojiyaa iPhone X, iPhone 6s iyo iPhone SE
Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay ka saartay iPhone X, iPhone 6s iyo iPhone SE buuggeeda.
IPhone-ka sanadkaan wali wuxuu la yimaadaa isla fiilada iyo xeedho
In kasta oo ay jiraan warar xan ah muddo bilo ah, taleefannada iPhones weli kuma haystaan ​​amar degdeg ah ama xeedho USB-C nooc kasta oo ay ku jiraan sanduuqa.
Daawo 12-daqiiqo oo kooban oo ah nuxurka Apple
Podcast 10 × 02: IPhone-yada cusubi waa halkan, sidoo kale Apple Watch sidoo kale
Waxaan falanqeyneynaa soo bandhigida iPhoen-ka cusub iyo Appel Watch. Ra'yi, falanqeyn wixii la soo bandhigay iyo wixii aan ku seegnay barnaamijkeenna toddobaadlaha ah ee aadan seegi karin, ku noolow kanaalkeenna YouTube.
HomePod wuxuu imaan doonaa Spain 26ka Oktoobar
HomePod wuxuu ka dhex muuqdaa Isbaanishka Apple Store inuu awood u yeesho inuu kaydiyo laga bilaabo 26 Oktoobar for 349 iyo wararka software-ka
Tani waa sida ay u kala duwan yihiin iPhone weli
IPhone-ka cusub ee la siidaayay wuxuu wax ka badalaa qoyska iPhone-ka, waana tan sida ay u kala duwan yihiin iPhone-ka ay u muuqdaan xilligan 2018 - 2019
Dual SIM wuxuu yimaadaa iPhone
Apple waxay hadda soo bandhigtay iPhone Xs iyo iPhone Xs Max oo leh mid ka mid ah astaamaha cusub ee ay isticmaaleyaal badani ku andacoodeen: Laba Sim oo isku iPhone ah.
iPhone Xr, IPhone-ka ugu midabada iyo qiimaha badan
Weli waxaan ku jirnaa soo bandhigida Muhiimka ah ee aaladaha cusub, iyo haddii aan rabno iphone badan ...
Taxanaha Apple Watch 4: Apple Watch ilaa heerka xiga
Apple ayaa hada soo bandhigtay nuuca cusub ee Apple Watch. Taxanaha Apple Watch ee 4-ta ah taasna waxay la timid dib u qaabeyn iyo astaamo cajiib ah.
Kingston Bolt Duo, iska ilow dhibaatooyinka xagga awooda ee taleefankaaga iPhone-ka
Kingston DataTraveler Bolt Duo waa xusuus banaanka kaaga jirta iPhone ama iPad taas oo balaarin doonta awoodeeda si looga fogaado inaad tirtirto sawirada ama fiidiyowyada
Xaqiijiyay: iPhone XS, XS Max iyo XR, iyo ilaa awoodda 512GB
Dillaac cusub ayaa xaqiijinaya magacyada iPhone-ka cusub iyo waliba awoodaha kala duwan ee lagu heli doono
Dib-u-eegista Eve Aqua, Maamulaha Waraabka HomeKit ee Ku-habboonaanta
Waxaan falanqeyneynaa xakamaynta waraabka otomaatiga ah ee Eve Aqua oo la jaan qaadaya HomeKit, oo leh astaamo xiiso leh laakiin xaddidan badan
6,1-inji iPhone ah oo wata shaashadda LCD ayaa yaraan kara toddobaadyada ugu horreeya
IPhone 6,1-inch ah oo leh shaashad LCD ah ayaa gabaabsi noqon kara maalmaha hore
Si toos ah ula soco soo bandhigida iPhone-ka cusub ee ku saabsan iPhone News
Waxaan kuu sheegeynaa sida aad ula socon karto soo bandhigida iPhone-ka cusub oo aad fikirkaaga ugala qaybqaadato kooxda Actualidad iPhone
Ka faa'iideyso qiima dhimisyadan nalalka Koogeek LED, fiilooyin iyo xargaha
Bixinta xiisaha leh ee nalalka Koogeek LED, fiilooyin casri ah iyo laydh xargaha leh oo leh lambarrada dhimista ee soo socda
Barnaamijka AirPort ee loogu talagalay macruufka ayaa loo cusbooneysiiyay si loola wadaago iPhone X
In kasta oo xaqiiqda ah in iPhone X uu suuqa ku jiray in ka badan 10 bilood, haddana waxaan weli ka heli karnaa tiro badan oo codsiyo ah oo aan weli la qabsan oo ka dhan ah khilaafaadka oo dhan, in kasta oo la malayn karo, codsiga AirPort Utility ayaa ahaa la cusbooneysiiyay si ay ula jaan qaado iPhone X
Hadda waa suurtagal in la keydiyo iPhone Xs iyo iPhone 9, oo ku yaal Romania
Hadda waxaad ku keydin kartaa iPhone Xs, iPhone Xs Max iyo iPhone 9 dukaanka Roomaaniga adoo adeegsanaya websaydhkooda iyo midabbo isku dhafan.
IPhone 9 ayaa ka muuqda sawir leh midabyo cusub
Masawirro dhowr ah ayaa na tusaya midabada uu iPhone 9-ka cusub ku imaan karo shaashadda 6,1 inji LCD ah iyo qiimo hoose.
Warbaahinta Jarmalka ayaa daabacda qiimaha rasmiga ah ee euro-da cusub ee iPhone Xs
Waxayna umuuqataa inaysan jirin wax qarsoodi ah moodooyinka cusub ee iPhone-ka ee Apple ay tahay inay soo bandhigto ...
Sida loogu beddelo sawirada qaab HEIF qaabab dhaqameed sida JPEG
Waxaan kuu sharraxeynaa sida aad u arki karto, u maamuli karto una beddeli karto sawirrada qaab HEIF qaabab dhaqameed sida JPEG.
Dadku waxay weydiistaan ​​batari dheeraad ah iPhone-ka cusub
Aynu eegno aragtida isticmaaleyaasha ee ku saabsan doorbidka heerka wararka.
Apple wuxuu furayaa shahaadada MFi ee hillaaca ee soosaarayaasha fiilada USB C
Muddo ka dib halka aan kaliya ku helnay Apple Lightning rasmi ah fiilooyinka USB C si aan u iibsanno ...
iPhone Xs Max wuxuu noqon lahaa magaca iPhone leh 6,5 inji shaashad
Sida laga soo xigtay xanta, wax walba waxay muujinayaan in iPhone Xs Max uu noqon doono nooca kala-sooca 6,5-inji ah ee Apple ay ku bilaabi doonto shaashadda OLED.
Duubista wicitaanada Skype waxay u yimaadaan Mac iyo IOS
Ragga ku jira Skype waxay filayaan bilaabista Kooxda Facetime iyagoo bilaabaya duubista wicitaanka fiidiyowga ee iOS iyo Mac.
Koogeek Door iyo Dib u Eegista Dareemka Daaqadda, Waxay ku habboon tahay HomeKit
Waxaannu tijaabinay Koogeek's Door iyo Window sensor, aalad yar oo ku habboon in lagu dhex-daro aaladaha kale ee ka socda barnaamijka 'HomeKit'.
Sida loo xaliyo dhibaatooyinka Bluetooth ee iOS 12
macruufka 12 sidoo kale xor kama aha qaladaad badan, isticmaaleyaal badan ayaa soo sheegaya qalad joogto ah oo ku saabsan xiriirka Bluetooth, waxaan kaa caawinaynaa inaad xalliso.
IOS 11 waxay ku sagootisaa ugu yaraan 85% korsasho
Dhowr maalmood ka hor bilowga rasmiga ah ee iOS 12 oo loo qorsheeyay usbuuca soo socda, ansaxinta iOS 11 horeyba waa ugu yaraan 85%.
Mophie wuxuu muujinayaa afar qalab Qi cusub si loogu dalaco iPhone-keena
Shirkadda caanka ah ee qalabka mobilada Mophie, ayaa soo saartay afar nooc oo siyaado ah oo lagu soo dallaco iPhone-ka ...
Eve HomeKit, oo horey loo yiqiin Elgato, ayaa soo saareysa 3 badeecooyin cusub
Laga soo bilaabo Actualidad iPhone, saaxiibkeen Luis Padilla ayaa ku soo bandhigaya, ku dhowaad toddobaadle, ku dhowaad dhammaan alaabada ku habboon ee HomeKit ee la heli karo Eve waxay hadda soo bandhigtay seddex alaab oo cusub oo ku habboon HomeKit, kuwaas oo aan ka helnay suuqyo Yurub ah.
Qalabka 7nm wuxuu ficil ahaan u gaar u noqon doonaa iPhone-ka
Mana u muuqato in soo saarayaasha taleefannada casriga ahi ay leeyihiin dhammaan dariiqooyinka dhaqaale ee lagama maarmaanka u ah inay awoodaan inay isticmaalaan tan ...
Square wuxuu bilaabayaa akhristaha kaarka magnetka hillaaca
Ragga jooga Square waxay cusbooneysiiyaan akhristahooda xariiqa 'magnetic stripe' ee iPhone-ka iyaga oo siinaya iswaafajinta dekedda hillaaca ee iPhones casri ah.
Netflix iyo Amazon waa inay abuuraan waxyaabo badan oo asal ah oo Yurub ah
Kuwo badan ayaa adeegsadayaasha ah, oo hal dhinac ah, kaliya doorbidaya nuxurka qaranka, nuxurka aan ka heli karno kanaallada kala duwan, Midowga Yurub wuxuu weerarayaa shirkadaha Mareykanka mar labaad wuxuuna ku qasbi doonaa inay bixiyaan ugu yaraan 30% buuggooda wax soo saarka Yurub.
Sida loo kiciyo habka mugdiga ah ee YouTube-ka
Habka mugdiga ahi wuxuu noqday, tan iyo markii la bilaabay iPhone X oo leh shaashadda OLED, mid ka mid ah ahmiyadaha ugu muhiimsan ee adeegsadayaal badan marka ay mugdiga ka hawlgelinayaan YouTube-ka ayaa ah hanaan aad u fudud oo noo oggolaan doonta inaan badbaadinno tiro badan oo batteri ah haddii aan sameyno isticmaalka joogtada ah ee barnaamijkan.
Lenovo wuxuu ku biirayaa bandwagon-ka 'HomeKit' oo leh Smart Home Essentials
Intii lagu guda jiray sanadkan shirkii IFA ee Berlin, shirkadda Shiinaha ee Lenovo ayaa soo saartay shirkad cusub ...
Kuwa ugu wanaagsan ee Amazon waxay bixisaa dib ugu noqoshada dugsiga
Waxaan doorannaa teknoolojiyada ugufiican ee ay Amazon na siiso ololaheeda "Ku Laabashada Dugsiga" ee 2018, iyadoo qiimo dhimis lagu sameynayo ilaa 40%.
Waxaan horeyba u arki karnaa iPhone XS fiidiyowga
Fiidiyow fikradeed ayaa na tusaya muuqaalka cusub ee iPhone XS ee Apple soo bandhigi doonto toddobaad gudihiis, oo leh midabkiisa cusub ee dahabiga ah
Xtorm Wave, waligaa batari ha uga dhamaan qalabkaaga
Waxaan tijaabinay batteriga dibedda ee loo yaqaan 'Xtorm Wave', oo ah beddel aad u fiican oo loogu talagalay kuwa doonaya batteriga weyn ee awoodda leh ee leh fiilada wireless
Tani waa waxa kaliya ee aan ka ogaanno iPhone XS
Waxaan soo aruurineynaa dhammaan xogta la yaqaan ee ku saabsan iPhone XS cusub ee Apple soo bandhigi doono Sebtember 12, warar xan ah iyo dillaac
Isticmaalayaasha waxay doorbidaan CarPlay inay ka shaqeeyaan Android Auto, laakiin waxay wataan Khariidadaha Google
In kasta oo adeegsadayaashu doorbidaan inay adeegsadaan Khariidadaha Google, haddana CarPlay ayaa ka sii horraynaya Android Auto qanacsanaanta guud
Soo dejiso gidaarka gidaarka cusub ee iPhone XS
Dhowr saacadood ayaan si dhab ah u ogaanay sida iPhone-ka cusub uu noqon doono sanadkan waxayna umuuqataa wax aan caadi aheyn in ...
Neato wuxuu soo bandhigayaa nadiifiyayaasheeda nadiifinta aaladaha robot-ka iyo astaamo cusub oo loogu talagalay moodelladii hore
Neato waxay hadda ku soo bandhigtay sheekooyinkeeda carwada IFA ee Berlin iyo ballanqaadka sumcadda caanka ah ee ...
Kuu dalab iPhone-kaaga qaab Xtorm Balance iyo Magic
Waxaan tijaabinay Saldhigga Xtorm Balance iyo Magic, oo laga sameeyay aluminium iyo alaabada dharka leh iyo naqshad fiican oo lagu dhejiyo meel kasta oo guriga ka mid ah.
Sida loo isticmaalo AirPort Express ee AirPlay 2 horeyba u lahaa router
Cusbooneysiinta kadib, waxaa jira dhowr isticmaale oo layaaban sida ay u isticmaali karaan AirPort Express si ay ...
ZENS waxay na tuseysaa xeedho cusub oo wireless ah
ZENS waxay ku soo bandhigeysaa sheekooyinkeeda carwada IFA ee magaalada Berlin oo ay ku jiraan xeedhooyinka dhammaan baahiyaha naqshadeynta aluminium
PlugBug Duo, wehelka aan lakala soocin ee safaradaada
Twelve South PlugBug Duo waa qalab muhiim u ah safaradaada oo kuu ogolaanaya inaad dib ugu buuxiso laptop-kaaga iyo laba aaladood oo kale hal fur.
Apple waxay ka dhigeysaa AirPort Express mid la jaan qaadaya AirPlay 2 oo cusbooneysiin ah
Waxay ahayd wax aan ka hadlaynay muddo bilo ah maxaa yeelay waxaa jiray calaamado muujinaya qaar ka mid ah betasyada iOS 11, ...
Giraanta ayaa si rasmi ah u timid Isbaanish si loo ilaaliyo gurigaaga
Ring, oo ah sumcadda caanka ah ee HD iskudhafyada fiidiyowga iyo kaamirooyinka ilaalada, ayaa si rasmi ah u yimid Isbayn iyada oo ay ku qoran yihiin gabi ahaan alaabteeda.
Kani waa AirSnap, kiiska maqaarka ee AirPods ee ay abuureen laba iyo tobanka Koonfurta [Falanqaynta]
Maalmo ka hor waxaan ka hadleynay soo bandhig cusub oo ay sameysay Twelve South, mid ka mid ah kuwa ugu caansan soo saarayaasha qalabka ...
Ka aqriso fasalada Maktabada Dadweynaha ee New York sheekooyinka Instagram
Ragga ka socda Maktabada Dadweynaha ee New York ayaa layaab ku keenay iyagoo keenay sheekooyin waaweyn sida Alice oo ku jirtay Wonderland sheekooyinka Instagram.
Sidee ayuu CarPlay ugu shaqeeyaa iOS 12
Waxaan kuu sharraxeynaa sida CarPlay ay ugu shaqeyso nooca cusub ee iPhone iyo iPad, iOS 12, iyadoo la adeegsanayo amarrada codka iyo kontaroolada jirka.
Nabadgelyo 3D Touch ee 2019, iyo qalin qalin Apple iphone ah sanadkan
Apple waxay ka fariisan kartaa 3D Touch iPhones-ka sanadka soo socda, laga yaabee inay tixgeliso qalinka Apple inuu yahay qalab isku habboon
miniBatt wuxuu na tusayaa xeedho cusub oo layaableh oo wireless ah
miniBatt wuxuu soo bandhigayaa sii deyntiisa cusub ee IFA ee magaalada Berlin oo ay kujiraan xeedho qaabeysan oo la ballaarin karo iyo xeedho kale oo aan muuqan.
Qalabka loo yaqaan 'SPC-Makeblock Neuron Inventor Kit', oo ah hab madadaalo leh oo lagu bilaabi karo robotikada
Waxaan ku tusineynaa xirmo ku habboon oo ay carruurtu ku baashaalaan inta ay bilaabayaan inay fahmaan fikradaha aasaasiga ah ee aaladaha robotikada iyo barnaamijyada.
Caqabadaha Waxqabadka cusub ee loogu talagalay sanad-guurada 50aad ee Beerta Qaranka Redwood
Sannad-guuradii 50-aad ee Beerta Qaranka ee Redwood ee ku taal Mareykanka ayaa soo dhow, shirkadda Cupertino ayaana ugu dabaaldegaysa caqabado cusub.
Microsoft ayaa sheegtay in barnaamijka Sway uu joojinayo shaqadiisa kahor dhamaadka sanadka
Shirkadda wax soosaarka ee Microsoft, marka lagu daro shirkadda lafteeda, waxay na siisaa codsiyo badan oo kala duwan oo laga heli karo App Store, shirkadda fadhigeedu yahay Redmond ayaa xaqiijisay inay joojinayso bixinta barnaamijka Sway ee loo maro App Store, laakiin dhammaan waxyaabaha la abuuray ayaa sii wad helitaanka.
Bishii Sebtember 21, iibinta iPhone-ka cusub ee 2018 ayaa bilaabmi lahayd
Taasina waa in warbaahinta Jarmalka qaarkood ay u qaadanayaan si aan caadi ahayn soo bandhigida moodooyinka cusub ee iPhone-ka ee ...
Ka waran haddii iPhone-ka soo socda ee la soo bandhigi doono bisha Sebtember loo beddelo iPhone XX?
Khadad ayaa la ogaaday iyadoo lagu sheegayo iPhone XX macquul ah Xcode 10, magac qaadi kara mid ka mid ah iPhones cusub ee 2018.
Blue Raspberry, tayada u dhiganta Mac, iPhone iyo iPad
Waxaan falanqeyneynaa makarafoonka loo yaqaan 'Blue Raspberry microphone', oo ah aalad la qaadan karo oo aad ku isticmaali karto kombuyuutarkaaga, iPhone-kaaga iyo iPad-kaaga adigoon xoogaa tayo ah kaa lumin.
IPhone-yada soo socda ayaa soo kordhin doona hagaajinta ku-dallaca wireless si ay uga dhigto mid wax ku ool ah oo dhaqso badan
Wax walba waxay muujinayaan in wadajirka IPhone-yada cusub aan arki doono isbeddelada ku dhaca amarka wireless-ka ee ay adeegsadaan sababo la xiriira isbeddelka qaybaha.
Koogeek Smart Light Strip, nal iyo qurxin loogu talagalay HomeKit
Waxaan fiirineynaa Koogeek's Smart Light LED strip, nal caqli badan oo casri ah oo sidoo kale HomeKit la jaan qaada oo ku rakibaya daqiiqado kooban.
Isu diyaari inaad ku laabato fasalka adigoo adeegsanaya barnaamijyadan aadka u wanaagsan ee iPhone, iPad iyo Mac [SWEEPSTAKES]
Waxaan soo aruurineynaa codsiyada wax soo saarka ugu fiican ee aad ka heli karto si aad ugu diyaariso iPhone-kaaga iyo iPad-ka sidii aad ugu noqon lahayd fasalka.
Ciyaarta istiraatiijiga ah ee ROME: Wadarta Dagaalku waxay ku imaan doontaa iPhone-ka Ogosto 23
ROME: Wadarta Dagaal, ciyaar fiidiyoow ah oo loo habeeyay iPad waqti hore, ayaa ku dhawaaqday inaan ugu dambayn yeelan doonno nooc iPhone ah Ogosto 23rd.
Siri ayaa dhawaan garan karta codkaaga si ay hawlo kala duwan u qabato
Shahaadadu waxay tilmaamaysaa in Siri si dhakhso ah u kala sooci karo codadka kala duwan, muuqaal muhiim u noqon doona HomePod.
Sanduuqa wireless-ka ee AirPods waxaa lagu soo oogi karaa saldhig kasta oo Qi ah
Ka soo horjeedda waxa ay shegeen shabakadu ee ku saabsan iswaafajinta qiimaha Qi ee cusub ...
Sida loo waafajiyo barnaamijka farriimaha ee Mac, iPad iyo iPhone
Waxaan dooneynaa inaan ku barinno sida loo qaabeeyo Farriimaha ka imanaya iOS si aad awood ugu yeelatid inaad u dirto ugana hesho fariimaha Mac-gaaga, iPhone-kaaga iyo dabcan iPad-kaaga.
Sida loola wadaago sawirada dadka kale iOS 12
Waxaan kuu sharraxeynaa sida loo isticmaalo mid ka mid ah astaamaha cusub ee iOS 12 kaas oo kuu oggolaanaya inaad sawirrada la wadaagto qof kasta adigoon lumin tayada
Galaxy Watch iyo Galaxy Home midkoodna looma tartami karo kooxda ay xafiiltamaan ee Apple
Wax walba waxay muujinayaan in Galaxy Watch iyo Galaxy Home midkoodna uusan u noqon doonin xafiiltan dhaadheer alaabooyinka la midka ah ee shirkadda Cupertino.
Logitech POWERED, oo ah saldhig cusub oo wireless ah oo lagugu soo rogo iPhone-kaaga
Logitech AWOODSAN, waa saldhig cusub oo xukun wireless ah oo u yimaada fududeynta lacag bixinta iyo adeegsiga ...
Sida loo aqbalo Apple Pay ganacsigaaga
Apple Pay waxaa hada laga heli karaa bangiyada waa weyn ee Spain isticmaalkiisuna wuxuu bilaabmayaa inuu sii kordho. Haddii aad ganacsi leedahay, waa inaad barataa sida ay u shaqeyso.
Sonos wuxuu sharxayaa sababta Ciyaartaada: 1 iyo kuwa kale ee ku hadla aysan u helin taageerada AirPlay 2
Maamulaha badeecada Sonos wareysi ayuu ku sharaxayaa sababta AirPlay 2 aan loogu adeegsan karin dadka ku hadla shirkada da'da weyn.
Suurtagalnimada Dual-SIM ee iPhone-ka soo socda ayaa lagu xaddidi karaa nooca 6.1-inji
Dhowr warbaahin Taiwan ah ayaa sheeganaya in imaatinka Dual-SIM-ka iPhone-ka uu ku koobnaan karo nooca 6.1-inji.
Adabtarada sameecadda dhagaha ee 3,5mm laguma dari doono sanduuqa iPhone-ka cusub
Waxay u muuqataa in iPhone-ka cusub ee sanadkaan uusan ku dari doonin adabtarada birta / 3,5 mm sanduuqa waxyarna ...
IPhone-ka mustaqbalka ayaa qaali noqon lahaa sababo la xiriira dhibaatooyinka ka dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha
Sannad kasta qiimaha moodooyinka cusub ee iPhone kor ayuu u kacayaa, tani waa wax iska cad oo muuqda, laakiin ...
Apple Ayaa Noqotay Shirkadii Ugu Horaysay Ee Trillion Dollar
Apple waxay ku guuleysatay inay jabiso caqabadda tiriliyanka dollar ee suuqgeynta suuqyada, wax aysan shirkad kale ku guuleysan illaa hadda.
Ha moogaan wax xagaaga ah, waxaan kuu soo qaadaneynaa xulashada saxda ah ee qalabka Aukey
Xagaagu waa wakhti fiican oo dib loo cusbooneysiiyo aaladaha aan u isticmaalno qalabkeena iDevices, waxaan kuu soo qaadaneynaa xulashada ugu wanaagsan Aukey.
Marka hore sanduuqa AirPods iyo hadda iPad-ka bilaa xayndaab la'aan, badhan la'aan iyo qaanad la'aan. IOS 12 code ayaa sii hadlaya
Waana ka dib markii noocyada beta-ka ee ay soo saartay Apple ay koodhka ilaha kuwan ka mid ahi muujinayaan siro muhiim ah ...
Waxaan u falanqeyneynaa kamaradaha amniga Yi ee gudaha iyo dibedda
Waxaan ku falanqeyneynaa kamaradaha amniga Yi gudaha iyo dibedda, oo aad ku abuuri karto nidaam ilaalin fiidiyow ah oo u gaar ah gurigaaga.
IPhone-ka 6,5-inji ah wuxuu lahaan lahaa qaab muuqaal ah
Waxay u muuqataa in qaabka iPhone-ka oo leh shaashad 6,5-inji ah uu yeelan doono ikhtiyaarka muuqaalka ama qaabka muuqaalka ee ...
Jarmalka ayaa noqon doona dalka ku xiga ee ku raaxeysan doona Apple Pay
Intii lagu gudajiray shirkii natiijooyinka ee shirkadda ku saleysan Cupertino ay qabatay shalay, Apple waxay bixisay, sidii caadiga ahayd, ...
Transcend Smart Reader, akhristaha kaarka muhiimka u ah fasaxyadaada
Waxaan dib u eegnay Transcend Smart Reader SD iyo akhristaha kaarka microSD, oo ku habboon iPhone iyo iPad si loogu wareejiyo waxyaabaha ku jira dhammaan jihooyinka.
Apple waxay soo bandhigi kartaa iPhones cusub bisha Sebtember 12
CNET waxay ku dhiiratay inay sameyso sharadkeeda markaan arki karno iPhones-ka cusub taariikhdeeda la soo jeediyayna waa Arbaco, Sebtember 12.
AirSnap waa kiiska cusub ee maqaarka oo labo iyo tobanka Koonfurta ay ku labistaan ​​AirPods-kaaga
Maanta waxaan ku tusineynaa AirSnap, kiiska maqaarka cusub ee si ammaan ah ugu labisan doona AirPod-yadaada si aad u rarto.
Nalalka Philips Hue waxay ku yimaadaan musqusha qaab muraayad ah
Shirkadda Nederlandka waxay na siisaa xalal fara badan oo nalalka gurigeenna ama xarunteena shaqada ah, iyadoo leh Philips nalalka casriga ahi muraayadaha kula soo gaadhaan shirkadda Dutch-ka ah ee Adore Mirror
Hadda Amazon Echo waxay heshaa wax kasta oo maqal ah sida AirPlay
Waxyaabaha cusub ee hadda jira ayaa ah inaan ku ciyaari karno ficil kasta oo ku saabsan Amazon Echo si dhakhso leh sida haddii ay tahay AirPlay mahadnaqa Alexa Cast.
Dhammaan wixii ku saabsan Baasaboorka Telegram
Telegram wuxuu maanta sii daayay noocyo 4.9 oo ka mid ah barnaamijyadeeda iOS iyo Android oo leh sheeko cusub, Baasaboorka cusub ee Telegram.
Apple waxay durbaba ka shaqeyneysaa xalinta nuglaanta ugu dambeysay ee lagu ogaadey xiriirka Bluetooth
Sanadkii la soo dhaafay, waxaa la shaaciyey in shabakadaha Wi-Fi ee isticmaala borotokoolka WPA2 ay leeyihiin nuglaansho u oggolaatay saaxiibbada kuwa kale inay soo galaan Dhibaatada ugu dambeysa ee amniga ee xiriirka wireless ayaa laga helaa isku xirnaanta 'Bluetooth', kaas oo aad ka hortagi karto taraafikada oo aad marin u hesho qalab.
Sida loo kiciyo cusbooneysiinta otomaatiga ah ee iOS 12
Cusboonaysiinta otomaatiga ah ee iOS 12 waa mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee nooca iOS ee soo socdaa uu na keenayo. Waxaan ku tusineynaa sida aan u dhaqaajin karno si iPhone-keena marwalba loo cusbooneysiiyo.
IPhone wuxuu sii wadaa inuu kordho iibka saamiga ka xadaya Android
Iibinta IPhone-ku waxay ku socotaa xawaare wanaagsan oo saamigeeda suuqyadu wuxuu ku kordhayaa Mareykanka, Isbaanishka iyo waddamada kale iyadoo la adeegsanayo Android.
Aasaasihii Siri Ugu Dambeeyay Oo Ka Baxaya Apple
Kaaliyaha Apple Siri ma ahayn abuuritaanka shirkadda lafteeda, laakiin waxaa laga helay dhowr sano ka hor, koox horumariyeyaal ah, kii ugu dambeeyay ee saddexda abuura ee kaaliyaha macmalka ah ee Apple, Siri, ayaa hadda ka tagay shirkadda, ayuu ku andacooday, shaqsi ahaan sababaha.
Goobta Ciyaaraha ee Fortnite ayaa soo noqon doonta berri
Fornite wuxuu noqday guul dhammaan dhufto ee laga heli karo maanta, kuwaas oo dhammaantood ka reebban Android, oo ah barxad ay 25-ka Luulyo, Xarunta Ciyaaraha ee Fortnite markale laga heli doono iyadoo la helayo warar cusub oo muhiim ah.
Apple wuxuu xakameyn karaa xawaareynta degdegga ah ee taleefannada iPhone-ka ee 2018, waana wax fiican
Xanta ayaa sheeganeysa in Apple ay xakameyn karto xeedhooyinka degdegga ah ee iPhone ee u baahan shahaadadooda si ay ugu shaqeyso 100%
Kuu dalag iPhone-gaaga meel kasta oo aad ku xireyso xeedhada qoraxda: Xtorm Instinct 10.000 Mah
Waxaan wajahaynaa xeedho noo caawin doonta inaan ka qaadno iPhone-ga, iPad-ka ama qalab kasta oo ay ugu wacan tahay tamarta qorraxda….
dhibco M, si buuxda loo hagaajin karo oo leh yareyn buuq
dhibco M waa dhagaha dhagaha la cusbooneysiin karo oo jawi ahaan ku habboon deegaanka oo ololahooda hadda laga heli karo Indiegogo.
Ku Shaqee Hada: Isbitaalka, oo ah jilid hawlo madadaalo u ah macruufka
Iyada oo la adeegsanayo jilitaanka daawada ee hadda ku shaqee: Isbitaalka, waa inaad maamushaa dhammaan qeybaha caafimaadka ee aan la qiyaasi karin oo aad noqotaa kuwa ugu fiican.
Sida loo xusho keyframe-ka Sawirka Tooska ah
Motion Stills ayaynu ku dooran karnaa shaashadeena Sawirka Tooska ah ee aan dooneyno inaan ku sii jirno marka dib loo ciyaaro.
Sida loogu celiyo albums-ka, liiska-heesaha ama heesaha Apple Music
Apple Music waxay u oggolaaneysaa isticmaaleha inuu ku celiyo albums-ka, liisaska liiska iyo heesaha si otomaatig ah, isagoon dib ugu celin gacantiisa.
Waxaan tijaabinay headphones-ka cusub ee tamarta maqalka 'headphones-ka badan
Waxaan tijaabinay Headphones-ka Tamarta Sistem-ka cusub2, sameecadaha dhagaha ee reer magaalka badankood ayaa kaa dhigi doonta inaad gasho moodada xilligan.
LIFX waxay na siisaa noocyo kaladuwan oo nal smart ah oo la jaan qaadi kara HomeKit, waanan tijaabinay nalalka ay ku shaqeeyaan oo waxaan ku tusi doonaa muuqaal ahaan
Fortnite wuxuu sii wadaa inuu qarxiyo tirooyinka wuxuuna uruursadaa in kabadan hal bilyan oo doolar iibsiyo isku dhafan
Shaki kuma jiro in xitaa Ciyaaraha Epic aysan fileynin guushaan cajiibka ah ee ciyaarta Fortnite Battle Royale, waana taas ...
Yaab! Apple waxay ku dari kartaa xeedho dhakhsa leh sanduuqa iPhones-ka cusub
Tanina waa mid ka mid ah dalabyada sida aadka ah loogu xusay markii la bilaabay iPhone-ka ...
Qalabka dhawaaqa ee Sonos Beam ayaa hadda lagu heli karaa 449 euro
Dhowr usbuuc ka hor ayaan soo saarnay maqaal aan ku tusnay wax soo saarkii ugu dambeeyay ee ay shirkada Sonos soo bandhigtay, baarka dhawaaqa ee Sonos Beam bar bar loogu tala galay telefishanka ayaa hada laga iibin karaa Spain lacag dhan 449 euro.
Mophie wuxuu soo bandhigayaa baytariyaal cusub oo dibedda ah oo wata dekedda hillaaca iyo shahaadada MFi
Nooca caanka ah ee qalabka iDevices Mophie, ayaa hadda soo saaray baytariyaal dibadeed oo cusub oo loogu talagalay iDevices-kayaga leh dekedda Hillaaca.
Apple wuxuu joojiyaa saxiixa iOS 11.4 kadib markuu sii daayo iOS 11.4.1
Toddobaadkii hore, raggii ka socday Cupertino waxay sii daayeen nuqulkii ugu dambeeyay ee iOS 11.4.1, oo ah nuqulkii ugu dambeeyay ee yimid dhowr betas ka dib oo u yimid wiilashii Los Cup ee ka yimid Cupertino ayaa joojiyay saxiixa nooca iOS 11.4 ka hor kan aan hadda heli karno on server Apple.
Waxaa sii kordheysa wax caadi ah in laga helo khiyaamo PUBG, shirkaddu waxay nagu dhiirrigelisay inaan soo sheegno
Markii aan ka hadlayno ciyaaraha moobiilka, maanta waxay umuuqataa in kaliya Fortnite laga hadlay, gaar ahaan ...
Ku xakamee qaboojiyahaaga meel kasta oo aad la socoto Sensibo Sky iyo iPhone-kaaga
Hadda waxaan ku jirnaa bartamihii xagaaga, waa lagu qanacsan yahay in la galo guriga ama xafiiska iyo in ...
Glass Curve Elite, oo ah muraayadda ilaalisa Apple Watch-kaaga
Shield Invisible wuxuu na siinayaa muraayad difaac ah oo loogu talagalay Apple Warch-ga oo si muuqata loo arki karo oo aan saameyn ku yeelanaynin muuqaalka ama isticmaalka shaashadda
Waxaan tijaabinay Danalock V3, qufulka casriga ah ee la jaan qaadaya HomeKit
Waxaan tijaabinay qufulka smart Danalock, oo ah kii ugu horreeyay ee HomeKit ee aan ku isticmaali karno qufullada Yurub. Waxaan sharxeynaa rakibideeda iyo maaraynteeda.
Bixinta ugu fiican ee Amazon Prime Day 2018 (La cusbooneysiiyay July 17)
Heshiisyada ugu wanaagsan ee Amazon Prime Day ee loogu talagalay kuwa jecel tikniyoolajiyadda. Ha ku waalin raadinta oo hubi xulashadeena.
POPSICASE, waa kiis aragti ka duwan
POPSICASE waxay na siisaa daboollo asal ah oo sidoo kale ka samaysan 100% alaab dib loo warshadeeyay oo laga keenay xeebteenna Mediterranean.
Madaxa cusub ee Siri waa John Giannandrea, oo ka yimid Google
Saxiixa cusub ee Apple ee Siri si uu u joojiyo inuu yahay mid dhexdhexaad ah, waa John Giannandrea, waa saxiix ka yimid qeybta Google ee AI.
Dhakhaatiirtu waxay ka walaacsan yihiin in dadka isticmaala maandooriyaha ay ku tiirsan yihiin Apple Watch oo ah nolol
Tirada dadka isticmaala kookeynta ayaa sii kordheysa, kuwaas oo noloshooda ku aaminay Apple Watch mahadnaqa dareemayaasha garaaca wadnaha ee na tusaya garaaca wadnaha waqti kasta.
Apple waxay bilaabeysaa sanad kale ololaha "Ku noqoshada dugsiga" waana kuwan qiimo dhimistiisa
Apple waxay si rasmi ah u bilawday ololeheeda dib ugulaabashada dugsiga halkaas oo ay qiimo jaban kaga bixiso barnaamijyadeeda Mac-yada iyo ipad-ka ardayda jaamacadaha.
Xilligii 5-aad ee Fortnite hadda waa la heli karaa, kuwani waa warkiisa
Xilli ciyaareedkii shanaad ee Fortnite halkan ayuu joogaa wuxuuna la yimid seddex war oo xiiso leh oo noo oggolaan doona inaan ku raaxeysano ciyaarta xitaa intaa ka sii badan